Sharci mamnuucaya astaamaha diimaha ee Quebec oo dhaqangalaya - Jigjiga Online
HomeWararka CaalamkaSharci mamnuucaya astaamaha diimaha ee Quebec oo dhaqangalaya
Sharci mamnuucaya astaamaha diimaha ee Quebec oo dhaqangalaya
Gobolka Quebec ee dalka Canada waxaa ka dhaqan galaya go’aan lagu mamnuucayo in dadka u shaqeeya dowladda ay xafiisyada ku xirtaan waxyaabo astaan u ah diin.
Sharciga oo loo yaqaano 21 wuxuu mamnuucayaa in dowladda gobolka uusan ka shaqeyn karin qof astaan diin ay ka muuqato.
Dadka uu go’aankan saameynayo waxaa ka mid ah xeer ilaaliyayaasha, qareennada, askarta, macallimiinta iyo dadka kale ee masuuliydaha sare haya.
Waxyaabaha la mamnuucay waxaa ka mid ah xijaabka dumarka, cimaamad iyo qamiiska, koofida Yusuudda iyo duubk weyn ee Hinduuga.
Sharciga ma qeexayo diin gaar ah, waxaana suuragal ah in caalamad kastoo diin oo qof uu xiran yahay in aanan la ogoleyn, taas oo ay xitaa ka mid noqon karto masiixiyadda.
Dadka haysta diimaha kala duwan ayaan ka soo horjeestay xeerkan cusub waxayna ku tilmaameen mid kala sooc ku sameynayo dadka kala duwan ee ku nool gobolka Quebec ee Canada.
Waxaa halkaas ka dhacay isu soo baxyo looga soo horjeedo go’aanka baarlamaanka, sidoo kale sharciyaqaanno ayaa u dacwooday maxkamadda sare ee Canada.
Dadka dhalleeceeyay waxay sheegeen in sharciga lagu bartilmaameedsanayo dumarka Muslimiinta ah ee madaxa u daboolan yahay, kuwaas oo gobolka ka shaqeeya.
Maamulka Gobolka wuxuu ku adkeysanayaan in la joogo xilligii si rasmi ah loo dhaqangelin lahaa sharciga, balse weli dhinacyo ay ka mid yihiin saraakiil dowladeed ayaa diiddan.
Hardie Yetman oo ah madaxa midowga macallimiinta Quebec ayaa sheegtay in ay u “dagaallami doonaan xuquuqda macallimiinta ay ka muuqato astaan diin”.
“Midowga wuxuu u taagan yahay in uu dhammaan shaqaalaha xuquuqdooda uu difaaco. Sharcigan wuxuu hareermarsan yahay qaar ka mid ah xuquuqda shaqaalaha”, ayey tiri.
Xisbiga midigta dhexe ee CAQ arrimaha lagu doortay waxaa qeyb ka ahaa ballanqaadkooda ku saabsan xakameynta soo galootiga iyo sharciyo ka dhan ah wadaadnimada.
Noel Bulkin oo ah madaxa guddiga iskuullada dowlad goboleedka Quebec ayaa sheegay in arrintan – inkastoo dhib ay leedahay – haddana maamul ahaan ay ku khasban yihiin inay u hoggaansamaan sharciga.
“Adeegsiga sharcigan wuxuu noqon doonaa mid dhib leh balse maamulka wuu fulin doonaa, sidaan horey u sheegnay”, ayuu yiri.
Sharcigan wuxuu qeyb ka yahay cutub ka tirsan dastuurka oo dowladda u saamaxaya in ay bedesho “xuquuqaha aasaasiga ah” ee diinta, hadalka, iyo isu imaatinnada; xuquuqda nolosha, xuriyadda iyo amniga qofka; iyo xuquuqda ah in aan qofka la faquuqin – waa kuwa meesha laga saari karo muddo shan sano ah.
Xisbiga talada haya ayaa sidoo kale isbedel ku sameeyay sharci laamaha amniga u fududeynaya meelmarinta arrintan.
Soomaalida siduu u saameynayaa?
Gobolka waxaa deggan Soomaali badan oo qaxootinnimo ku tagay halkaas iyo kuwo ku dhashay oo astaanta diinta ay ka muuqato marka ay ku sugan yihiin xafiisyada dowladda.
Cabdi Abow Maxamed oo gobolka ku nool wuxuu sheegay in saameynta uu sharcigan yeelan karo ay ka mid yihiin dhaqaale la’aan. “Qofka wuxuu ku qasbanaan karaa in uu isaga tago shaqada”.
“Wuxuu abuuri karaa in qofka uu waayo xaqiisa diimeed oo meel lagaga dhaco ama tii bini-aadamnimo uu u lahaa. Waxaa kaloo ka dhalan kara in niyad jab iyo cuqdad ay qofka ku beeranto”, ayuu yiri Cabdi.
Dad badan oo uu saameynayo go’aankan ayaa weli ka warsugaya dalabka ay dowladda Canada u direen iyo dacwadaha la geeyay maxkamadda sare ee dalkaas.
Waxaa laga cabsi qabaa in sharciga uu saameyn ku yeesho habka shaqaaleysiinta, iyo in ay yaraato dadka ka tagaya gobollada kale ee shaqada u doonanaya Quebec.
Gobollada kale ee Canada ayaan isbedel ku sameyn shuruucda xuquuqda diimaha, kuwaas oo qof kasta u ogolaanaya in ay ka muuqan karto astaan diin.
Markii ugu horeysay ma ahan?
Doodda astaamaha diimaha waxay kaalin weyn ka ciyaareysay xaaladda gobolka muddo 10 sano ah, mana ahan markii ugu horeysay ee xisbiga siyaasadda ee Quebec uu soo gudbiyo sharci arrimahaas xiriir la leh.
Sannadkii 2014-kii, xisbigaas wuxuu gudbiyay sharci loogu yeeray Xeerka Qiimaha, kaas oo shaqaalaha dowladda ka mamnuucayay xirashada astaan diin, sidoo kalena mamnuucayay niqaabka.
Balse sannadkii 2017-kii, mid kaas ka yara fudud ayuu meelmariyay xisbiga qunyar socodka ah midkaas oo ahaa in wejiga aan la daboolan marka adeegyada dowladda la raadsanayo, balse maxkamad ayaa lala tiigsaday, isla markiina waa la joojiyay dhaqangalka xeerkaas.
Nigeria Oo U Yeedhanaysa Safiirkeeda Koonfur Afrika Xilli Soomaali Badan Hantidooda La Boobay
Itoobiya: Fadeexad Ka Taagan Imtixaanka Jaamacadda Lagu Gelayo